Semalt - Ahoana ny fomba hamahana ny fifamoivoizana an-tserasera amin'ny Google Analytics
Tsy mety ny milaza fa ny angon-drakitra no vato fehizoron'ny fanapahan-kevitra rehetra momba ny raharaham-barotra ety anaty aterineto. Zava-dehibe ho antsika ny mamolavola ny fahatakarantsika ny angon-drakitra ary miantoka fa eo anelanelan'ny fironana ara-barotra amin'izao fotoana izao. Tokony handinika ny fitondran-tenan'ireo mpampiasa ao amin'ny vohikalantsika ihany koa isika ary hahafantatra ny zava-drehetra momba ny fanodikodinam-pahefana. Azo atao izany raha tsy manaisotra ny fifamoivoizana ny bot avy amin'ny Google Analytics ary mifantoka amin'ny fahazoana vokatra tadiavina.
Namoaka tsiambaratelo ara-barotra momba izany i Alexander Peresunko, mpitantana ny Success Suisse ao amin'ny Semalt .
Mba hanangonam-baovao, tokony hampiasa karazana fanaraha-maso sy fanaraha-maso samihafa ianao. Na izany aza, ny Google Analytics no fitaovana tena azo ampiasaina sy tena ampiasaina. Izany dia ahitanao ny maha-ara-dalàna ny angon-drakitrao ary mampiseho ny vokatra mety aminao. Maherin'ny roa arivo tapitrisa tranonkala mampiasa Google Analytics mba handinihana sy handinihana ny kalitaon'ny fitsidihan'izy ireo. Ny fifamoivoizana Bot no zavatra mety hanimba ny tranokalanao ary mety hahatsapa ho mijaly amin'ny aterineto ianao. Vokatr'izany dia mitarika ho amin'ny fanatsoahan-kevitra ratsy, fanombanana ary fanombatombanana izany, izay manelingelina ny fahombiazan'ny tranonkalanao sy ny fitokisana.
momba ny Bots
Tsy tokony hanadino isika fa ho an'ny mpitsidika rehetra dia misy hitsidika ny mpitsidika ny bot, ary azo antoka fa ny bots dia lasa zavatra tena ilaina ary tsy maintsy ampifandraisina amin'ny tranonkala. karazana bots: bota tsara sy bota ratsy.
Ny bota tsara dia ireo tsara fitondran-tena tsara sy tsara ho an'ny tranonkalanao, raha ireo bobo ratsy kosa dia ireo noharian'ny hackers sy ireo mpanafika ary mikasa ny hitsikera sy hanasongadina ny tranonkalanao tsy ara-dalàna. Ny tatitra iray dia manambara fa maherin'ny roapolo isan-jaton'ny fifamoivoizana amin'ny boot tsara no tratran'ny basy maloto sy mampidi-doza. Noho izany dia afaka miteny isika fa ny botsika dia tsy afaka ny hitoetra amin'ny tranokalam-pandaminana amin'ny vidiny rehetra ary tokony ho nesorina araka izay azo atao.
Ny karazana robots roa hafa dia bôsin-doza sy zana-basy. Ny boka Ghosts dia ireo izay tsy mitsidika ny tranonkalanao fa maneho ny vokatra mitovy amin'izany, raha ny botsan'ny zombie kosa no manome ny tranokalanao manontolo. Izy ireo dia mamoaka tatitra ao amin'ny Google Analytics ary mody milaza fa tena izy. Ampidiriny ao amin'ny antontan-kevitra momba ny analytics ny fehezany manokana ary hiezaka hanisy ratsy azy amin'ny fomba iray na ny iray hafa.
Ahoana ny fandroahana ny fifamoivoizana amin'ny Bot
Google vao haingana nilaza fa misy vahaolana maromaro amin'ny fanivanana botsika tsara, botso ratsy ary spam referral ao amin'ny Google Analytics. Ho an'ity tanjona ity, tokony hanangana fomba fijery tsy filaminana ianao ary hahafantatra ny loharanon'ny fifamoivoizanao. Tokony ho fantatrao ireo tricks ny fanavahana ny botsabe sy ny bota ratsy. Azonao atao ny manova tetik'ady ara-barotra maromaro mba hampitomboanao ny fahafahanao hahazo fomba fijery tokana ao amin'ny tranonkalanao. Izany koa dia tombony raha toa ka manao karazan-tsakafo hafa ho an'ny loharanom-pidirana anatiny sy ivelany. Azonao atao ny manakana ny IPs maro izay miahiahy ary tsy misy ifandraisany amin'ny tena izy. Raha sendra misy basy zombie, dia tokony hosivanina ianao amin'ny fahitana ny toerana misy azy sy ny sarin-dian-tongotra. Noho izany dia tokony hahafantatra ny zava-drehetra momba ny loharanony ianao ary mandroso amin'ny dingana fananganana drafitra Source .